Qaliinka lagu sameeyay Madaxwaynihi hore ee dalka oo lagu guuleystay – The Voice of Northeastern Kenya
Qaliinka lagu sameeyay Madaxwaynihi hore ee dalka oo lagu guuleystay
Madaxweynihi hore ee dalka kaas oo hawlgab ka noqday siyaasada dalka Mwai Kibaki ayaa qaliin maalinta shalay ahayd lagu sameeyay u noqday mid lagu guuleystay iyado haddana lagu soo waramayo in xaladiisa caafimaad ay tahay mid aad u wanaagsan.
Mr Kibaki ayaa qaliin dhinaca qoorta ah kaas oo looga soo saraayay xinjir ku jirtay xidid kaga yaala qorta lagu sameeyay maalinta shalay ahayd kaas oo lagu guuleystay iyado haddana lagu soo waramayo in ay xaladiisa caafimaad tahay mid aad u wanaagsan isagona la filaayo in gordhaw u xaladiisa caafimaad ee hore ee wanagsanayd u dib ugu soo laabto.
Kibaki oo maalinta axada ahayd loo duuliyay waddanka Koofur Afrika ayaa waxa isbitaalka lagu dabiibayo ee Netcare Sunninghill ku wehlinaaya qaar kamid ah qoyskiisa kuwaas oo si dhow u la socda xaladiisa caafimaad.
Mr Kibaki ayaa loo sheegay in u qalin mari doono kadib marki ay dhaqatiirta xaladiisa caafimaad la tacalaayay ay arkeen xinjir kaga jirtay mid kamid ah xididada kaga yaalay qorta oo ay sheegen in ay kaga taalay qeyb fiican oo jirkiisa kamid ah taas oo qalin lagu sameyn karo.
Maalinta shalay ahayd oo khamiis ay ku beegneyd ayaa waxa ay ahayd maalintiisa 5-aad ee u ku qaato isbitaal ku yaala magaalada Johanesburg ee waddanka Koofur Afrika.
← Alfred Mutua oo isaga baxay xisbiga wiper
Waiguru oo lagu wado in ay shaaca ka qaado in ay utartami doonto kursiga gavanatornimo ee countiga Kirinyaga →